ईंटहरू र बलहरू 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
ईंटहरू र बलहरू
अघिल्लो खेल: QuizzLand लाइट
अर्को खेल: बबल खेल:: ..
बबल खेल:: क्रिसमस संस्करण वर्षको सर्वश्रेष्ठ समय यहाँ छ! हो क्रिसमस! त्यसो भए यो पनि [...]
ईंट्स र बलहरू एक धेरै रोचक नयाँ आर्केड खेल हो। खेलका नियमहरू धेरै सरल छन्। तपाईंले एउटा निर्दिष्ट स्थानमा बल फ्याक गर्न आवश्यक छ। बल दर्शाउँछ र वर्गबाट ​​नम्बरहरू हटाउन बाउन्स गर्दछ। एक पटकमा एक वर्ग हटाउन यो तपाइँको होइन। अन्तिम लक्ष्य, यो उल्लेख गर्न लायक छ कि तपाईंले हिसाब गर्नु पर्छ र यसलाई विचार गर्नु अघि तपाईंले बल फ्याक्नु सुरु गर्नु अघि, किनकि जति धेरै बल बाउन्स हुन्छ, अधिक वर्गहरू समाप्त हुन्छन्। बल अनियमित ढ Cast्गले कास्ट गर्नाले मात्र खेल असफल हुन सक्छ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?
# आर्केड#arkanoid# html5Androidरोक्नुहोस्चिकोभौतिकीकौशलसुरुवात गर्नुहोस्मोबाइलबच्चाहरुसंख्याबलरिबाउन्डआरा पजल